Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Gudoomiyaha Xisbiga Dadka Oo U Hambalyeeyey Baarlamaanka Soomaaliya Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Muqdisho:(A.M.Network)-War murtiyeed ka soo baxay Gudoomiyaha Xisbiga Dadka oo ku sugan wadanka Mareykanka ayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ugu hambalyeyey talaabada mudan qadarinta qiimaha dowladnimada oo mudanayaasha baarlamaanka ay u hordhigeen madaxweynaha talooyin wax weyn ka taraya madaxbanaanida ismaamulka qaranka Soomaaliyeed.
Waxaa war murtiyeedkaas lagu soo bandhigay iney tahay wax laga argagaxo in madaxweynaha Soomaaliyeed uu talooyinka wax ku oolka ah oo ay u soo jeediyeen mudanayaasha baarlamaanka uu ka soo qaado ra’yi shaqsiyadeed sidaasna uu ku dafiro awooda baarlamaanka oo ah awooda dalka ugu sareysa. Codsiga baarlamaanku waa awood dowladnimo oo aan ahayn mid la dheyelsan karo waayo codkoodu waa go’aan qasaba inuu meel maro.
Xisbiga Dadka wuxuu taageeraya codsiga ay dhowaan soo jeediyeen mudanayaasha baarlamaanka oo ay ku dalbadeen in madaxweynuhu uu xilka si nabada isaga casilo. Wuxuu aaminsan yahay xisbigu in talaabadaas ay dalka ka badbaadineyso niyad jabka iyo raja beelka ay shacabku kala kulmeen hogaanxumida madaxweynaha. Waa aragtixumo aan siyaasada sal iyo raad midna ku lahayn in la isku maaweeliyo in wakhtigan uusan isbedelkaas ku ahayn munaasab ama aysan jirin cid dhaanta isaga. Aragtidaas waa astaan ay adeegsadaan kelitaliyeyaasha damacoodu yahay iney xukunka si joogaan inta ay mucaaradka ugu helayaan fursad ay ku tirtiraan. Waxaa sidoo kale jirta aragti qabyaaladeed oo cid kasta oo ku guuldareysata hogaanka siyaasada iney marka ugu dambeysa dabada la gasho beesheeda oo la geliyo in beesha duulaan lagu yahay awoodeeda, hantideeda, iyo deegaankeeda.
Marka la qiimeeyo xaaladaha cakiran oo ay soo muuqato xasaradaha ay dabada ku wataan ma dhici karto xaalada siyaasadeed iney sidii hore caadi ugu muuqato iyada oo la helayo digniino halisa oo shacabka Soomaaliyeed ku soo fool leh amaba ay hadda la soo gudboonaatey abaaro iyo macluul, tacadiyo shacabka Soomaaliyeed ay Kenya ugu geysatey dalkeeda, iyo musuq iyo maamul la’aan weli ka jirta inta badan degmooyinka Soomaaliyeed. Dhibaatooyinkaas waxaa horseeday dowlada oo aan sameyn waxqabad looga hortegayo masiibooyinkaas hestey shacabka iyo dowlada. Hadda oo la soo garay in shacabka iyo caalamka ay ka aaminbaxeen dowlada waxaa haboon in madaxweynaha uu joojiyo meereysigiisa uu derbiga madaxa iskala dhacayo, loogana baahan yahay in si geesinimo leh uu u aqbalo khaladaadkiisa, shacabkana uu ka siiyo raaligelin inuusan ku guuleysan wixii ay ka rajeynayeen,dabadeedna uu qaato tilaabada laga sugayo oo ay ku jirto maslaxda dowladnimada Soomaaliyeed.
Xisbiga Dadka wuxuu u soo jeedinayaa madaxweynaha inuu qaato talada odeyaasha baarlamaanka, uuna aqbalo qaraarka natiijada hogaanxumidiisa. Haddii taas la waayo lagama yaabo in waxqabad ay soo kordhiso dowlada si kasta oo ay u hesho fursad lagu siinayo wakhti dheeraada. Haddii aan dhaqso loo helin isbedel ku yimaada hogaanka dalka, Soomaaliya waxey gudo geleysaa xaalado adag oo shacabka u keenta colaad, abaar, dhaqaalexumo daran, iyo dowlada dhexe oo lagu kala dareero, loona noqdo dagaaladii qabiilka iyo kooxeysigii hubeysnaa. Waxaa muuqata in beesha caalamka aysan daneyneyn hogaanka hadda jira iney maalgeliso,waxaa sidoo kale iska cad in xukuumadu aysan ka talin dalka oo aysan dhaqaale ka helin dakhli ka soo gala canshuurta. Jidka u furan madaxweynaha waa inuu xilka ka dego intii dhalanteed aan dhab ahayn sannadba sannadka ka dambeeya la rajeyn lahaa,wakhti dheereysigaasna uu dhalin karo aafooyin shacabka u keenta halaag.
Xisbiga Dadka wuxuu si wadaninimo ku dheehan tahay ugu hambalyeynayaa tilaabada geesinimada leh oo ay dhanka wanaagsan u qaadeen mudanayaasha baarlamaanka oo garwaaqsaday hogaanka madaxweynaha inaan wax sii xumaada ma ahine aysan wax wanaaga uga soo socan shacabka Soomaaliyeed. Xisbiga Dadka wuxuu aaminsan yahay in arrintan lala soo daahay, loona baahnaa sannadguuradii kowaad in la xisaabtankan dhabta ah uu yimaado.
Madaxweynaha wuxuu dhegaha ka fureystay codka shacabka ay ku muujinayeen kalsoonixumada ay ka qabaan kartida xubno ka tirsan xukuumada oo saaxiibo dhow la ah iyo tacadiyada ay u geysanayeen siyaasiyiinta iyo saxaafada xorta ah, wuxuu sidoo kale wax kama jiraan ka soo qaaday edeymihii ay codkooda dheer ugu soo jeediyeen bulshada caalamka oo ay kaga hadleen in aan hantida Soomaaliya loogu yaboohay aan lagu aamini karin maamulka hogaaminaya talada Soomaaliya. Waxey sidoo kale cid walba la yaabtay markii howlwadeenada dowlada ay noqdeen kaadiriinta ka tirsan koox dimeed qarsoon oo lagu soo tababaro dalka Sudan, kuwaas oo dhiig wasaqeysan la wadaaga kooxda yar ee kelitalisnimada ku hogaaminaya talada madaxtooyada.
Mudanayaasha baarlamaanka koox yar iyo xisbi gaara midna talada dalka uguma aysan dooran, taas macnaheedu waxey tahay talada dalka iney tahay mid ku dhisan talowadaag, shacabka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwana ay xaq u leeyihiin iney ka qeyb qaataan howlaha loogu adeegayo dowladooda. Waa nasiibdarro haddii hogaanka uu caynaanka u hayo madaxweynahu uu koox gaara awooda dalka gacanta u geliyey, taas oo ay ka dambeyso xeelad guracan oo hanti iyo awoodba lagu qorsheynayo sidii kooxdaas ay u suurtgelin lahyd dib u doorashada madaxweynaha 2016.
Xisbiga Dadka wuxuu rumeysan yahay in talada odeyaasha baarlamaanka ay fursad wanaagsan u tahay si weji wanaagsan leh inuu xilka uga tago madaxweynuhu oo xaalada Soomaaliya in taladiisu uga darto mooye aysan ka soo rayneyn. Waa xaqiiq in madaxweynuhu laf ahaantiisu uu hogaankiisa kala kulmay dhibaato uusan xal u heli karin, qalalaaso badana ay ku hayso naftiisa, isagana ay dan ugu jirto maanta inuu ku qanciyo naftiisa in dadaalkiisa aan la mahdin, sidaas daradeedna la soo gaarey wakhtigii uu ka nasan lahaa dhibaatada isdaba joogta oo uusan maareyn karin.
Waxaan madaxweynaha kula talin lahayn inuu ka tanaasulo siyaasda ku saleysan xujada, xiriiftanka, iyo iska daba wareejinta ama inuu xalka ka raadiyo inuu talada dalka la dhexgalo talowadaag ku saleysan beel ama koox dimeed.
Bulshada caalamka iyo baarlamaanka waxaa la gudboon iney damaanadqaad siiyaan madaxweynaha inaan lagu soo oogi karin wax dembiya haddii uu ogolaado xilka inuu si nabada ugu soo wareejiyo baarlamaanka. Haddii uu talada baarlamaanka diido madaxweynuhu waxaa la gudboon baarlamaanka iney codka kalsoonida kala noqdaan. Haddii aysan labadaas midna dhicin oo shacabka Soomaaliyeed ay la soo gudboonaato macluul ay ku la’daan ama dagaalo beeleed oo lagu hoobto masuuliyadeeda waxaa qaadaya baarlamaanka, madaxweynaha, iyo xukuumada.
DHAGEYSO R/wasaare C/weli Sheekh Mardhow Qoryooleey Waxey Noqon Doontaa Meel Soomaalida Dhan Soo Dhaweysa
Dhageyso Ra’iisul Wasaare C/Wali Sheekh Axmed Oo Shir Jaraa’id Ku Qabtay Xafiiskiisa Isagoo Faah Faahino Ka Bixinayo Safarkii Gobolka Sh/Hoose